Ngubani Inkokeli YamaNgqina KaYehova? | Incwadi Yonyaka Ka-2015
“Gxoth’ Iinkokeli Ezi”
NgoJulayi 13, 1957, uColón, igosa eliphezulu kurhulumente wabhalela umphathiswa wezangaphandle esithi: “Kukho intetho eyaziwayo ethi: ‘Yibeth’ entlok’ inyoka.’ Eyona ndlela yokuliphelisa nya eli hlelo lamaNgqina kaYehova kweli lizwe, kukugxotha abavangeli balo. Ukwenza ngolo hlobo kuya kushiya abazalwana babo bengenazinkokeli, yaye xa ingekho intloko, akukho nto banokuphumelela kuyo.”
Kungekudala emva koko, uMphathiswa Wezokhuseleko uArturo Espaillat wakhupha umyalelo wokuba abathunywa bevangeli abalishumi ababesasele, baphume baphele kweli lizwe. NgoJulayi 21, 1957, uRoy Brandt wabhalela uTrujillo, emcela ukuba badibane ukuze amcacisele ngokuma kwethu. Inxalenye yaloo leta yayisithi: “Oku kuthiywa kwegama likaYehova uThixo ngabathile kweli lizwe, kufana nqwa noko kwenziwa kubapostile bakaYesu ngabantu ababelahlekisiwe.” Emva koko, uMzalwan’ uBrandt wakhuthaza uTrujillo ukuba afunde iZenzo isahluko 2 ukusa kwesesi-6, “Icebiso elihle nelicacileyo elanikelwa nguMgwebi uGamaliyeli lisasebenza nanamhlanje.” Ngamagama amakhulu uMzalwan’ uBrandt wabhala ngokuyinxenye amazwi akwiZenzo 5:38, 39 athi: “YEKANI ABA BANTU KUBA, UKUBA LO MSEBENZI BAWENZAYO UVELA KUTHIXO, NINOKUZIBHAQA NGENYE IMINI NISILWA NOTHIXO.” Kodwa yonke loo nto yangena kule ndlebe yaphuma kuleya. NgoAgasti 3, 1957, abathunywa bevangeli basiwa kwisikhululo seenqwelo-moya baza bagxothwa kwelo lizwe.
UDonald Nowills, wayeneminyaka eyi-20 xa wayenyamekela umsebenzi kwiofisi yesebe
Babeza kuthini ngoku abazalwana noodade balapho njengokuba abathunywa bevangeli bemkile? Ngaba babeza kusala bengenayo “inkokeli,” ngokweengcinga zikaColón, igosa eliphezulu likarhulumente? Akunjalo, nguYesu ‘intloko yomzimba, olibandla.’ (Kol. 1:18) Ngoko ke, abantu bakaYehova eDominican Republic babengashiywanga “bengenankokeli.” Endaweni yoko, uYehova waqhubeka ebanceda abantu bakhe, nentlangano yakhe yenjenjalo.
UDonald Nowills, wayeneminyaka eyi-20 xa wacelwa ukuba anyamekele umsebenzi kwiofisi yesebe emva kokuba abathunywa bevangeli begxothiwe kwelo lizwe, yaye wayeneminyaka nje emine ebhaptiziwe. Nangona wayekhe wangumveleli wesiphaluka iinyanga ezimbalwa, umsebenzi wesebe wawumtsha kuye. UMzalwan’ uNowills wayeneofisi encinane ekhayeni lakhe eyayenziwe ngomthi namazinki, umgangatho wayo umdaka. YayiseGualey, ingingqi eyingozi eCiudad Trujillo. Encedwa nguFélix Marte, wenzela ilizwe lonke iiMboniselo.
IMboniselo ka-1958 ekhutshelwe ngomatshini wokukopa
UMary Glass, owayetshate noEnrique owayesejele ngelo xesha, wancedisa uMzalwan’ uNowills. Uthi: “Ndandiphuma nje emsebenzini ngo-5:00 emva kwemini ndiye eofisini kaMzalwan’ uNowills ukuze ndibhale iMboniselo ngomatshini. Yena uMzalwan’ uNowills wayezikhuphela ngomatshini wokukopa. Emva koko, udade owayevela eSantiago, owayebizwa ngelinye igama elithi ‘the angel,’ wayethatha ezo magazini zikotshiweyo aziqhusheke ngaphantsi enkonkxeni yeoli aze azigqume ngelaphu. Ngaphezu kwelo laphu wayebeka icassava neetapile, aze abeke irhonya ngaphezulu. Emva koko wayekhwela izithuthi zikawonke-wonke aze aye emantla elizwe, apho wayeshiya iMboniselo ibe nye ebandleni ngalinye. Iintsapho zazibolekisana ngaloo Mboniselo ukuze ziyifunde.”
UMary uthi: “Kwakufuneka silumke ngeyona ndlela kuba ezitratweni kwakusehla kusenyuka abezomthetho bekhangela le ndawo yayiprintwa kuyo iMboniselo. Kodwa zange bayibhaqe. UYehova ebesoloko esikhusela.”